Shirkad lacag lagu siiyo inay burburiso qoysaska - Idman news
Shirkad lacag lagu siiyo inay burburiso qoysaska
Waxaa jirta shirkad gaar loo leeyahay oo lagu magacaabo “wakaresaseya” si ay xaaskaaga u shukaansadaan kaddibna kuugu caawiyaan inaad iska furtid. Laakiin lacagtu waa imisa?.
Sanadkii 2010, Takeshi Kuwabara waxaa xukun maxkamadeed loogu riday inuu dilay gacalisadiisa, Rie Isohata. Arrinta maskaxda caalamka qabsatay ma ahayn musiibada dilka ah, balse waxay ahayd in Kuwabara uu ka tirsanaa koox lagu magacaabo wakaresaseya – wuxuuna lacag uga qaatay Isohata seygeeda si uu xidhiidhkooda guurka usoo afjaro.
Halkaas ayey labadooda ka billaabeen xidhiidh jacayl oo markii dambe noqday mid ay isku fahmeen.
The wakaresaseya industry in Japan is widely regarded as seedy, with many of those hired working in the shadows without operating licences
Sidaas darteed Isohata seygeeda wuxuu sawirradaas caddeyn ahaan ugu adeegsaday kiis maxkamadeed oo uu ku doonayay inuu xaaskiisa isaga furo.
Caddeymaha noocaas ah aad bay muhiim uga yihiin dalka Japan, marka ay nin iyo xaaskiis midkood furriin doonayo.
Markii ay Isohata arrinta dhacday, way ka cadhootay waxayna go’aan ku gaadhay inay xidhiidhka u jarto gacaliyaheeda cusub, Kuwabara. Laakiin isagu raalli kama uusan ahayn inay ka tagto, wuxuuna ku dilay xadhig uu ku ceejiyay.
Muddo hal sano ah kaddib waxaa lagu xukumay 15 sano oo xabsi ah.
Dhibaato soo gaadhay shirkadda Wakaresaseya
Adeegsiga wakaresaseya waxay caawineysaa qof doonaya inuu xidhiidhkiisa soo afjaro isagoo aan dhibaato la kulomin
Hoos u dhac weyn ayaa ku yimid shirkadda ka shaqeysa burburinta qoysaska ee wakaresaseya, kaddib markii uu dhacay dilkii Isohata.
Musiibadaas ayaa horseeddat in wax laga baddalo qaabkii ay u shaqeyneysay shirkaddu. Waxaa ku adkaatay inay dhinaca dowladda ka hesho shati ay howlaheeda ku fuliso.
Waxyaabaha kale ee hoos u dhigay waxaa ka mid ahaa in ay qandaraasyada ka diideen shirkadaha ku xayeysiin jiray dhinaca online-ka.
Shacabka ayaa dareen cadho leh ka muujiyay howshooda, sidaasna waxaa ugu adkaatay inay sii shaqeeyaan.
Haddana sidaasoo ay tahay, toban sano kaddib dilkii Rie Isohata, waxaa hadda dib usoo laabtay xayeysiimihii dhinaca online-ka ee loo sameyn jiray shirkaddan, ganacsigeeduna wuxuu u muuqdaa inuu mar kale sare usoo kacayo.
Inkastoo qarashka ay wakaresaseya qaadaneyso si ay qoyskaaga u burburiso uu aad u badan yahay, haddana waa la daneynayaa in la adeegsado.
Soo rogaal celinta wakaresaseya
Shirkaddan wali suuqeeda waa mid qarsoodi ah. Daraasad dhawaan la sameeyay ayaa lagu ogaaday in qiyaastii 270 qof oo ka shaqeysa wakaresaseya lagu xayeysiinayo dhinaca online-ka.
In badan oo ka mid ah waxay la shaqeeyaan hay’adaha sirdoonka ee waddamada, iyagoo ka kaashada sida lagu ogaan karo arrimo badan oo dadka khaas u ah, si ay ugu fududaato inay qofka xidhiidh ula sameeyaan si sahlan.
In ay sii socoto shaqada wakaresaseya waxay muujineysaa in lacagta iyo khiyaanada ay kaalin weyn ka ciyaarayaan burburka xidhiidhada qoysaska iyo lamaaneyaasha, waliba si ka badan sida ay dadka dareemayaan.
Qoraa Stephanie Scott, oo fadhigeedu yahay London ayaa sharraxday daraasad ay ku sameysay waxqabadka wakaresaseya
“Shirkadda wakaresaseya ay kaa caawineyso in aadan wax buuq ah galin. Xaaskaagu waxay aad ugu badan tahay inay kugu raacdo dalabka furriinka, haddii ay jeceshahay qof kale oo ay dooneyso inay nolol cusub la gasho ruuxaas.” Ayey tidhi Stephanie Scott, oo ah qoraa soo saartay buugaag ka hadlaya jacaylka.
Sidaas darteed arrintan waxay wax tar leedahay marka uu qof ka mid ah lamaanaha kasoo horjeedo in la kala tago, sida ay sheegtay qoraaga.
“Waayo haddii hal dhinac uu diiddan yahay burburka qoyska, waxaa adkaaneysa dacwadda maxkamadda ee la xidhiidhta xaaladdan,” ayey sii raacisay hadalkeeda.
Previous Geesiyaal Xaq u dirir ah oo ay Waajib tahay inaynu dhamaanteen garab istaagno!
Next Ilhaan Cumar oo ka dalbatay Waaxda Amiga Maraykanka in la baadho fal foolxun oo lagu kacay Dad muslimiin ah